जनही दुई सय मात्रै खर्च गर्ने भारतीय पर्यटकले कहाँ पुग्ला त पोखराको पर्यटन व्यवसाय | Jukson
जनही दुई सय मात्रै खर्च गर्ने भारतीय पर्यटकले कहाँ पुग्ला त पोखराको पर्यटन व्यवसाय
पोखरा, १५ कार्तीक
भारतको उत्तर प्रदेश निवासी मुलिक देव पोखरा घुम्न आए अनि लेकसाईडमा बसे । जब भोक लाग्यो अनि उनि लेकसाइडको बजारमा रहेका सबै रेष्टुरेन्टहरुमा भारतीय खानाका परिकार खोज्दै हिडे तर पाएनन् । करिव एक किलोमिटर हिडे पछि पनि उनले भनेजस्तो भारतीय खानाको रेष्टुरेण्ट नभेटे पछि लेकसााईडको गल्ली नं १८ को चोकमा रहेको पसलमा सोधे–“ईन्डियन खानाका परीकार पाउने ठाउँ कतै छैन ?”
पसले आफै पनि रेष्टुरेन्ट व्यवसायी रहेछन् अनि उनले भने–“ अलि अलि ईन्डियन सबै रेष्टुरामा पाइन्छ ।” हजुरले खाजेको कस्तो परिकार होला ? आफ्नो रेष्टुरेण्ट भित्र लेगेर मुलिकलाई मेन्यु देखाउदै थिए । तर मुलिक देवले ईन्डियन स्वाँदमा कुनै खाने कुरा नभेटेको भन्दै अन्त्यमा रोटी तरकारी खाने निधो गरे ।
यो त एक उधारहण मात्रै हो । पोखराको लेकसाईडमा प्रायजसो सार्क मुलुक बाहेकका पर्यटकहरुलाई लक्षित गरे व्यवसाय संचालनमा रहेका छन् । पछिल्लो समयमा भारतीय पर्यटकहरुको संख्यामा ह्वात्तै बृद्धि भएपछि खानाका कारणले भारतीयहरु समस्यामा पर्ने गरेको भारतीयलाई नै लक्षित गरेर होटल संचालन गरेका होटल शिवमका संचालक राजन सुवेदी भन्छन् । उनि भन्छन्–“भारतीयहरु पनि पर्यटक हुन् भन्ने सोँचको विकास हामी व्यवसायीहरुमा भएकै छैन। लेकसाईडमै कतिपय होटलहरुमा त भारतीय पर्यटकहरुलाई प्रवेश नै निषेध छ।”
गर्मी छल्न र घार्मिक हिसाबले मठ,मन्दिरको दर्शन गर्न दशै देखी तिहारको बिचमा भारतीय पर्यटकहरुको ताती नै लाग्छ पोखरामा । कुनै होटलमा अग्रिम बुकिङ्ग भएन भने बस्नका लागि केठा पनि पाईदैंन ।
पर्यटन व्यवसायी बिबेक पौडेल भन्छन्–“भारतीयहरु मुक्तिनाथ, मनकामना र पशुपतीनाथको दर्शनका लागि यहीं समयमा आउने गर्छन् तर पनि उनिहरुले कोठा र यात्राका अवधिमा सौचालयमा बाहेक अन्य ठाउँमा एक रुपैया खर्च गर्दैनन् ।” यस्ता खालका पर्यटकले सरकारको २० लाख पर्यटक ल्याउने योजनामा संख्यात्मक हिसाबले त टेवा पुर्याउला तर आर्थिक विकासमा कस्तो असर पर्ला ? उनले भने ।
पोखराका अर्का पर्यटन व्यवसायी तथा होटल सघंका पुर्व अध्यक्ष हरी शर्मा भन्छन्–“अन्य पर्यटकले मात्रै धानिन सक्ने अवस्था छैन, कोठा मात्रै बेचेर भए पनि भाडा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले अब सोंचेनौ र किचन सहित आउने भारतीयलाई व्यवस्थीत गरेर पोखराको खाना खुवाउने व्यवस्था गर्न सकेनौ भने भारतीय पर्यटकबाट पर्यटन व्यवसायको भविश्य छैैन।”
“भारतीयहरु दाल, चामाल, नुन-तेल, पिठो सबै आफै लिएर आउछन् अनि बाटोमा पकाएर खान्छन् अनि उनिहरुले बनाएको फोहोर हामीले सफा गर्नुपर्ने।”
बोर्डरबाटै होटल बुक गरेर आउने कारणले गर्दा कोठाको मुल्य पनि अत्याधिक कम हुने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । पुर्व अध्यक्ष शर्मा भन्छन्–“हामी बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भन्न पनि लाज लाग्ने रेटमा कोठा दिनु परेको छ।”
उनका अनुसार प्रत्येक कोठामा चार पाँच जना सम्म पनि बस्ने र सामान्यतया एउटा कोठाको ८ सयका दरमा बोर्डरबाटै बुक गर्ने एजेन्सीले पठाउने गरेका छन् । उनको यो भनाईमा अर्का व्यवसायी विवेक पनि सहमत छन् । उनि भन्छन्–“बोर्डरका एजेन्टले स्टार क्याटोगोरिका होटल भनेर महंगोमा प्याकेज बनाउछन् अनि सामान्य होटलमा राख्छन् जसले गर्दा गेष्टको कम्प्लेन हामीले खानु पर्छ ।”
गत वर्ष तीन लाख संख्यामा भारतीय पर्यटक पोखरा आएका थिए । गर्मी छल्न र बिदा मानाउन भारतीयहरु विशेष गरी पोखरा आउने गरेको पर्यटन बोर्ड पोखराका प्रबन्धक सुर्य थपलियाले जानकारी दिए ।
भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथ क्षेत्रको भ्रमण गरेपछि मुक्तिनाथ क्षेत्रमा धार्मीक पर्यटनको संख्यामा बृद्धि भएको छ । यो वर्ष पनि तीन लाख भन्दा बढी पर्यटक पोखरा आएको उनको भनाई छ । तर पोखरामा पर्यटक आए पछि व्यापार राम्रै होला भन्ने सोचेका पोखराका पर्यटन व्यवसायीले अहिले भारतका पर्यटकलाई देखेर तिन छक परेका छन् । धार्मीक पर्यटकका रुपमा आउने भारतीयहरु प्रायः आफैले सवारी साधन र खाना पकाउने ग्याँस चुलो समेत लिएर आउछन् ।
पर्यटन व्यवसायी बिजय केसी भन्छन्–“भारतीयहरु दाल, चामाल, नुन-तेल, पिठो सबै आफै लिएर आउछन् अनि बाटोमा पकाएर खान्छन् अनि उनिहरुले बनाएको फोहोर हामीले सफा गर्नुपर्ने।” आफ्नै सवारी साधान, आफ्नै खाना पकाउने सेट र बोर्डरमा बुक गरिएको न्युनतम शुल्कको कोठाको भाडाले मात्रै हामीलाई भारतीय आउदा के फाइदा भयो त ? संख्या बढ्नु मात्र राम्रो मान्न सकिन्न, जसले व्यवसायलाई कुनै फाईदा नै छैन केसी भन्छन् ।
तर, केसीको कुरामा लेक प्याराडाइज रेष्टुरेन्ट एण्ड बारका संचालक तिर्थ सुबेदी सहमत छैनन् उनी भन्छन् अहिले मेरो रेष्टुरेन्टमा दैनिक दश पन्ध्र जना भारतीय पर्यटक खाना तथा खाजाका लागी आउने गर्दछन् तर उनीहरुको माग अनुसार आफुले सुविधा दिन नसेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्–“भारतीयले आफ्नो स्वाँदमा खाना खोज्छन्, हाम्रो बजारमा उनीहरुको स्वाँदको परिकार बनाउने मान्छे कै अभाव छ अनि कसरी उनीहरुको माग पुरा हुन्छ ? अनि आफै किचन लिएर न आए के गर्नु त ?”
पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनका अनुसार भारतीयहरुले धेरे जसो रोटी तरकारी र अन्य पनि उनिहरुको आफ्नै स्वाँदको खानाहरु खोज्छन तर भएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सकिको छैन ।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी सुर्य भुजेल भन्छन - ''भारतीय पर्यटकहरु यात्रा गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको बढीनै ख्याल गर्छन। हाम्रा राजमार्गहरुमा भने जस्तो गतीलो खाना नपाउने भएका कारण पनि उनीहरु आवश्यक खाना समेत लिएर आउछन ।''
भारीतीय पर्यटक आउनाले होटल व्यवसायीलाई बाहेक अन्य व्यवसायमा फाइदा नपुगेको पोखरा टानका सचिव जिवनराज सापकोटा बताउछन् । उनि भन्छन्–“हामीले भारतीय पर्यटक आउदा खुसी हुने कुृनै ठाउँनै छैन आफ्नो तरीकाले आउछन-जान्छन। खाने सामाग्री देखि गाइड पनि उतैबाट आउछन अनि पोखरामा उनीहरुले सामान्य होटलका कोठा लिएर बस्छन। यसले पोखराको पर्यटन बजार कता जादै छ हामीले कहिल्यै सोचेका छैनौं ।”
भारतीय पर्यटकहरु वसेका कोठामा अन्य पर्यटकहरु वस्न असहज महसुस गर्ने पर्यटन व्यवसायी राजन सुवेदीको भनाई छ । उनि भन्छन् भारतीय पर्यटक वसेको होटल चारकोश परवाटै चिनिन्छ उनिहरु कोठामा वस्ने वित्तिकै वरडा वा झ्यालमा कपडा सुकाई हाल्छन् अनि कोठाको कुनामा पान खाएर थुक्ने गर्दा अन्य पर्यटकलाई राख्नै सकिदैन ।” कोठा नदिउँ आएका पाहुना हुन्, दिउ अर्कौ पल्ट त्यो ररुममा कोही बस्न मान्दैनन् उनको अनुभव छ । कोठाका भित्ताभरी पान, गुड्का सुपारीले लत्पत्तीएको हुन्छ के गर्ने यस्तै समस्या भए पनि व्यवसाय धान्नै प¥यो उनी भन्छन् ।
पर्यटन व्यवसायी गणेश थापा भन्छन् अहिले पोखरामा ६० प्रतिशत भारतीय पर्यटक ४० प्रतिशत अन्य देशका पर्यटक रहेका छन् । उनि पछिल्लो समय आएका पर्यटकहरु प्रति त्यती सन्तुष्ट छैनन् । उनि भन्छन् –“आज भोली क्वालिटीका गेस्ट नै आउन छोडे, लामो छुट्टीको समय पारेर घुम्न आउने पर्यटक आज भोली दक्षिण एशियाका मात्रै हुन थाले युरोपियन र अन्य मुलुकका पर्यटक एकाद मात्र आउछन् ।”
अन्य बिदेशी पर्यटकलाई होटलमा छिर्ने बित्तिकै भारतीय पर्यटकले आँफैले ल्याएको भान्छाको सेटमा खाना पकाएको देखेपछि नकारात्मक प्रभाव पर्ने,अर्को पटक त्यो पर्यटक होटलमै नछिर्ने तथा अरुलाई पनि त्यस्तै सुझाब दिने गरेको थापा बताउछन । यसले गर्दा युरोपीयन पर्यटकहरुले गन्तव्य परिवर्तन गर्न थालेको अनुभव पनि थापाको छ ।
तर नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवन्धक सुर्य थपलियाका अनुसार खुल्ला सिमाना र धार्मीक सम्बन्धका कारण पनि भारतीय पर्यटकले आँफै बोकेर आउने खानाका सामनलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने धारणा राख्छन् । उनि भन्छन्–“हामी बीचको एतिहासिक सम्बन्धका कारण पनि हामीले किचन ग्रुप भएर आउने भारतीय पर्यटकलाई नियन्त्रण गर्न सकिदैन र त्यो सम्भव पनि हुदैन ।” पोखराको पर्यटनमा भारतीय पर्यटक वैकल्पिक रुपमा मात्रै भएकाले त्यसमा आत्तिनु नपर्ने पनि उनको भनाई छ ।"
कास्कीमा आक्रामक प्रचार गर्दै नेकपाले थाल्यो चुनावी कार्यक्रम